Baradhada Dmitrov waxay u qalantaa inay noqoto dhadhanka Ruushka - majaladda "Nidaamka Baradhada"
Soosaarayaal ka yimid meel ka baxsan magaalada Moscow ayaa ka qeyb qaadanaya tartankii ugu horreeyay ee heer qaran ah "Dhadhanka Ruushka-2020". Noocyada lagu soo bandhigay waxaa ka mid ah Dmitrovsky Potato.
Dhadhaminta tartanka qaran ee Ruushka ee loogu talagalay noocyada cuntada ee gobolka, oo ay soo qabanqaabisay Wasaaradda Beeraha ee Ruushka, waxaa loogu talagalay in lagu soo jiito dareenka guulaha ganacsiyada yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ay ka geysteen waaxda warshadaha beeraha isla markaana gacan ka geysanaya abuuritaanka dhibco horumarineed oo cusub oo loogu talagalay horumarinta dhulka miyiga ah ee gobollada dalkeenna. In ka badan 500 magac oo ka socda 79 hay'adood oo ka socda Ruushka ayaa ka qayb galaya tartanka. Natiijo ahaan, 22 guuleysta sideed magacaabis ayaa la ogaan doonaa.
Tartankii ugu horreeyay ee qaran ee alaabooyinka cuntada "Dhadhannada Ruushka" waxaa ka qaybgalaya 25 soo-saare oo ka socda gobolka Moscow. Kuwaas waxaa ka mid ah sida Mozhaisk Milk, Jiis ka tirsan Gobolka Moscow, Posadskaya Kovrizhka, Lukhovitsky Cucumber, Yegoryevsky Med, Lemonade oo ka socda Chernogolovka, Kolomenskaya Pastila, Kolomensky Kalach. Degmada magaalada ee Dmitrovsky waxaa matalaya seddex magac oo kala ah: "Dmitrovsky baradho", "Dmitrovsky gingerbread" iyo "Tvorog iz Gorki".
"Dmitrovsky baradho" - oo ka socota kooxda caanka ah ee shirkadaha "Khudaarta Dmitrovsky". Haysashada beeraha, oo ka shaqeynaysay suuqa beeraha ee Ruushka in ka badan 25 sano, maanta waxaa ku jira 5 shirkado. Waa soosaaraha ugu weyn ee khudaarta, baradhada iyo saladhka Ruushka, oo ay u shaqeeyaan 300 oo qof. Bedka lagu beeray waa 12,6 kun hektar. Shirkaddu waxay leedahay in ka badan 250 unug oo tiknoolajiyad casri ah. Haysashada beeraha waxaa iska leh waxa loogu yeero wareegga sanadka oo dhan - 400 tan oo badeecooyin kala duwan ah ayaa la raraa maalin kasta.
Shirkaddu waxay shaqeyneysay laba fac oo ka tirsan qoyska Filippov. Sii wadiddu waxay gacan ka geysaneysaa sidii loo ilaalin lahaa caadooyinka shirkadda iyo jeclaanta waxa aan qabanno.
Baradhadu ka haysato Filippov haysashada beeraha qoysku waxay u qalantaa sheegashada doorka nooc caan ah oo u dhow Moscow. Dhulka barwaaqada ah ee daadadka Yakhroma iyo tikniyoolajiyadaha ugu casrisan ayaa u oggolaanaya Kooxda Shirkadaha Khudaarta Dmitrovsky inay koraan baradhada bey'ada ku habboon. Dhadhankeeda muddo dheer ayaa looga mahadceliyay gobollada kala duwan ee Ruushka.
In ka badan 100 shirkado shabakadeed oo waaweyn ayaa si guul leh ula shaqeynayey haynta beeraha muddo dheer.
Madaxweynaha kooxda shirkadaha "Khudaarta Dmitrovskie":
“Aniga oo dhalinyaro ah, waxaan fahmay in noloshaydu ku xirnaan doonto dhulka. Waalidkey waxay ka shaqeeyeen beer wadareed, marwalba waan caawin jirnay. Marka hore beer hoosaad, ka dibna beer wadareed - markuu 15 jir ahaa, wuxuu hore uga soo shaqeeyey kaaliye shirkad isku darka miraha goosta. Waxaan rabay inaan noqdo aqoonyahan cilmiga beeraha. Dugsiga kadib wuxuu galay Akadeemiyada Timiryazev, halkaas ayuu wax ku bartay muddo hal sano ah. Waxaana la iga codsaday inaan sii wato waxbarashadaydii Jarmalka. Intii lagu jiray afartan sano, dib-u-kicintayda ayaa dhacday, ujeeddo cad oo noloshu u muuqatay. Maanta, shirkadeenu kama liidato shirkadaha ugu fiican Yurub marka laga hadlayo xalalka tikniyoolajiyadda, xagga istiraatiijiyadda horumarinta. Waan ku faraxsanahay alaabtayada waxaanan mas'uul ka nahay tayadooda.
Antonina NEFEDOVA, deggan Dmitrov:
- Qoyskeena dhexdiisa, suxuunta baradhada waxaa jecel carruurta, carruurta ay dhaleen, iyo annaga. Ma lihin aqal u gaar ah xagaaga, sidaas darteed waxaan si joogto ah u iibsannaa khudradda. Waxaan mudnaan siinaynaa beeralayda maxalliga ah iyo qoysaska. Badanaa waxaan qaadannaa alaabada "Dmitrovsky khudradda". Waxaan ka baranay tartankii "Dhadhanka Ruushka", halkaasoo shirkadeena ay ka qeyb gasho, waana hubaal inaan ku taageeri doonno codeyn.
- Degaankayagu waligiis wuxuu ahaa beeraley, xitaa waxaa loogu yeeri jiray beerta khudradda ee caasimadda. Khudaar tayo sare leh oo macaan ayaa lagu beeraa beeraheena. Iyo baradhada Dmitrov aad ayey u fiican yihiin. Sidoo kale karootada, xididdo, kaabash. Marwalba waxaan iskudayaa inaan iibsado khudaarta deegaanka. Way macaan tahay! Waxaan jeclaan lahaa in baradhada Dmitrov ay gasho boos mudan tartanka "Dhadhanka Ruushka". Lafteeda ayaa horeyba ugu codaysay iyaga.
Aynu taageerno baradhada Dmitrovsky. Codbixinta soconayaa ilaa Diseembar 2, 2020 loo dhan yahay
Diiwaan gelin looma baahna.
Tags: "Dhadhanka Ruushka-2020""Dmitrovskie khudradda"Baradhada Dmitrovskygobolka Moscow